Thwebula Kaspersky 2016 16.0.0.614... – Windows – Vessoft
Kaspersky – a unqulo wesi arab esinamandla isivikelo computer yakho. Isofthiwe inikeza isivikelo eziphambili amagciwane, trojans, spyware, izikelemu, zobuqhawe, njll Kaspersky uhlola ngokuzenzakalelayo ukuphepha kwemithombo ahlukahlukene web, amasofutiwe namafayela. Isofthiwe aqalaze ezingeni ukulondeka Wi-Fi kanye azisa umsebenzisi mayelana sengozini yayo. Kaspersky uqinisekisa isitoreji okuphephile amaphasiwedi, encrypts idatha bese kudala yokusekelayo. Futhi Kaspersky iqukethe mode ekhethekile ukuze Sinqanda ukufinyelela yezingane website okuqukethwe eziyingozi.
Isivikelo trojans kanye spyware
ukuphequlula Safe amawebhusayithi
Ukuhlolwa amafayela Downloadable
Ukuthola of ngishiyeka ohlelweni
Anti-ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi
Amazwana on Kaspersky:
Kaspersky Ahlobene software:
Avast 12.3.3154 Free Antivirus futhi Premier; 12.1.3076 beta Internet Security...
Antiviruses Isofthiwe ukususa amagciwane, trojans kanye spyware. Isofthiwe aqalaze for the izinsongo ukuthi waba uhlelo a umphumela usebenzisa inethiwekhi.
English, Español, Deutsch, 中文... SmadAV 11.1
Antiviruses Ithuluzi ukubona ususe amagciwane noma izinsongo ezahlukene. Isofthiwe ikuvumela ukuba asuse izinhlobo ezahlukene amagciwane futhi silungise izinkinga ebhukwini ohlelweni onegciwane.
English, Українська, Français, Español... Scilab 5.5.2
English, Українська, Français, Español... Crypto! 4.2
Abashayeli Isofthiwe ukuze kuthuthukiswe yisikhathi noma ezilimele umshayeli izinguqulo ohlelweni bese izicelo ehlukahlukene. Futhi isofthiwe kwenza ukuba isipele abashayeli ngamunye.
System nokwenza Ithuluzi ukukhonza ngcono ukusebenza ohlelweni. Isofthiwe uyakwazi ukulungisa amaphutha ohlelweni bese uhlanza ebhukwini out udoti.